५० वर्ष लागिन् बाहुबलीकी ‘शिवगामी’, चल्तीका हिरोइनभन्दा बढी छ पारिश्रमिक:: Naya Nepal
५० वर्ष लागिन् बाहुबलीकी ‘शिवगामी’, चल्तीका हिरोइनभन्दा बढी छ पारिश्रमिक
‘बाहुबली’ सिनेमाबाट ‘शिवगामी देवी’का रूपमा दर्शकमाझ लोकप्रिय बनेकी भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन मंगलबारबाट ५० वर्ष लागेकी छन्।
उमेर बढेसँगै अभिनेत्रीहरूको पारिश्रमिक कम हुने भएपनि राम्या भने यो मामिलामा अरूभन्दा फरक छिन्। ५० को उमेरमा पनि उनले दक्षिण भारतीय सिनेमाका चल्तीका अभिनेत्री भन्दा बढी पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छिन्।
आजबाट ५० वर्ष लागेकी उनै अभिनेत्रीका बारेमा केही तथ्यहरू यस्ता छन् :
‘बाबुबली’ दियो नयाँ पहिचान
‘बाहुबली’ सिनेमाले यसमा अभिनय गरेका थुप्रै कलाकारलाई नयाँ परिचय र चर्चा दियो। यो सिनेमा हिट भएसँगै यसमा काम गर्ने सबै कलाकारहरूको पारिश्रमिक बढेको छ। यसमा राम्या कृष्णन पनि पर्छिन्।
‘बाहुबली’को दुबै भागमा उनले महत्वपूर्ण भूमिकामा काम गरेकी थिइन्। दर्शकले उनको भूमिकालाई राम्रै मनपराए। यसपछि राम्यले पनि आफ्नो पारिश्रमिक बढाएकी हुन्।
कति छ राम्याको पारिश्रमिक?
राम्याले हाल दक्षिण भारतका चर्चित अभिनेत्री तमन्ना भाटिया तथा रकुल प्रीत सिंहभन्दा पनि बढी पारिश्रमिक लिने गरेकी छन्।
हालै उनले ‘सैलाजा रेड्डी अल्लुदु’ सिनेमामा काम गर्दा एकदिनको ६ लाख पारिश्रमिक बताइन्छ। सिनेमाका लागि उनले २५ दिनको छायाकंन सम्झौता गरेकी थिइन जस अनुसार उनको पारिश्रमिक डेढ करोड भारू हुन आउँछ। उनले लिएको यो पारिश्रमिक दक्षिण भारतीय सिनेमाका धेरै चर्चित अभिनेत्रीले लिने पारिश्रमिक भन्दा धेरै हो। तमन्नाले एउटा सिनेमा खेलेबापत ६५ लाख भारू लिन्छिन भने राकुलले प्रतिसिनेमा १ करोड लिने गरेकी छिन्।
किन छाडिन् बलिउड?
राम्याले ‘खलनायक’, ‘क्रिमिनल’, ‘शपथ’ तथा ‘बडे मियां छोटे मियाँ’ जस्ता बलिउड सिनेमामा काम गरेकी छन्। बलिउडमा भने उनी लामो समय सक्रिय भइनन्। बलिउडमा काम गरेका सिनेमाले राम्रो गर्न नसकेको र प्रस्तावहरू पनि सोचे अनुसारको नआएपछि आफूले बलिउड छाडेको उनको भनाइ छ।
‘मैले ब्रेक लिएको हैन। खासमा मेरा सिनेमाले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् र मैले आएका प्रस्तावमा खासै चासो लिइन। फेरी यो समयमा मैले दक्षिण भारतीय सिनेमामा एकदमै राम्रो काम गरिरहेको थिएँ’, उनले एक अन्तरवार्तामा भनेकी थिइन्।
विश्वप्रतिष्ठित महोत्सवमा छानियो पूजा र विभुषणको ‘घनटाउके, धामी र सामुराई’
ठेलागाडीमा म:म बेच्दै केकी र गौरव (भिडियो)